Madaxwayne Farmaajo oo kulan kula yeeshay Xildhibaanadda Daarood Aqalka Madaxtooyadda. – Hornafrik Media Network
Madaxwayne Farmaajo oo kulan kula yeeshay Xildhibaanadda Daarood Aqalka Madaxtooyadda.
Kulankan oo goor dhow soo dhamaaday ayaa ku dhex maray Madaxtooyo Guddi ay iska soo dhex xuleen Xildhibaanadda Beesha Daarood iyo Madaxwayne Maxamad C/laahi Farmaajo.
Guddigan oo ka kooban 7 Xubnood oo ay iska soo dhex saareen Xildhibaanadda Beesha Daarood ayaa kala xaajooday Madaxwayne Farmaajo qadiyadda Qalbidhagax iyo Xiisadda Siyaasadeed ee ka dhalatay.
Guddigan ayaa dhismihiisu yimid kadib markii Xalay Kulan ay wada yeesheen Xildhibaanadda Daarood iyo Madaxwayne Farmaajo uu ku dhamaaday Natiijo la’aan, Waxaana Madaxwaynuhu uu ka codsaday inay samaysteen Guddi, isla markaana Kulan dambe isugu soo laabtaan, isla xalay ayeeyna Xildhibaanada Daarood samaysteen Guddi matala.
Kulankan oo soo dhamaaday ayaa lagu kala tagay markii uu Madaxwaynuhu ku guuldaraystay inuu ku qanciyo Xildhibaanadda Daarood inay ka tanaasulaan ku dhaganaanta Qadiyadda Qalbidhagax, Waxayna Xildhibaanadda Daarood Madaxwaynaha si cad ugu sheegeen inaysan marnaba Qadiyadaasi ka tanaasulayn, iyagoona ka dalbaday in Madaxwaynaha si cad uga hor yimaado Go’aanka Xukuumadda.
Xildhibaanadda Daarood ayaa ku adkaysanay inay ridaan Xukuumadda Khayre oo ay ku haystaan Khiyaano Qaran inay gashay, Waxayna Madaxwaynaha u sheegeen inay aragtidaas kala midaysan yihiin Xildhibaanadda Soomaali wayn oo si isku mid ah arrintan uga dhiidhiyay.
Madaxwayne Farmaajo ayaa lagu cadaadinayaa inuu cadeeyo Mawqifkiisa ku aadan Qadiyadda Qalbidhagax, taasoo Madaxwaynuhu uu ka biyo diidsan yahay, isagoo u sababaynaya inuusan ku qanacsanayn Go’aanka Xukuumadda, balse uu diidan yahay inay kala hadlaan. balse Xildhibaandda Daarood ayaa u sheegay Madaxwayanaha Xalay inaysan ku qancayn wax ka yar inuu ka hor yimaado Go’aanka Xukuumadda.
Madaxwayne Farmaajo ayaan illaa iyo hadda cadayn Mowqifkiisa ku aadan Qadiyadda Qalbidhagax, balse waxa uu hadda u muuqdaa inuu difaacayo Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre oo si buuxda u sheegatay inay Muwaadin Soomaali ah u gacan galisay Itoobiya, iyadoo daliishanaysa Heshiis ay sheegtay in horay ay Dowladda Somalia ula gashay Itoobiya.
Falanqeeyayaasha Siyaasadda Somalia ayaa aaminsan in Madaxwayne Farmaajo fursada kaliya ee u banaan ay tahay inuusan difaacin Xukuumadda Khayre, isla markaana cadeeyo Mowqifkiisa ku aaday Qadiyadda Qalbidhagax.
Akhriso Dukumintiyo Sir ah oo Muujinaya Dadkii ay dileen Alshabaab iyo kuwa u qorshaynaa.